मेनुका पौडेलको यस्तो समाचार किन शेयर गरे हास्यकलाकार तथा निर्माता किरण केसिले ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १३, २०७५ समय: ८:४६:१६
इटहरी/ हामिलाई लाग्छ कसैको सहयोगको लागि एक शेयर निकै महत्त्वपूर्ण हो । सत्य यहि हो पनि, एक शेयरले कसैलाई ठूलो सहयोग पुग्छ भने किन नगर्ने ? तर, यस्ता शेयरले कहिले काहीँ आफैलाई कमजोरी बनाउछ । अर्थात त्यहा लेखिएका कुराहरुका कारण पनि अरुले आफुमाथी औला उठाउने ठाउँ पाउछन् । अहिले यस्तै भएको छ । अझ सेलिब्रेटिले यस्तो काम गर्यो भने त आलोचना टन्नै खेप्नु पर्छ ।